Kooxda Manchester City oo doonaysa inay safkeeda ku xoojiso daafac ay ku raad joogtay Manchester United – Gool FM
Haaruun November 15, 2019
(Manchester) 15 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Manchesrer City ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay safkeeda ku xoojiso daafac ka tirsan Benfica kaasoo ay ku raad joogtay Manchester United.
Manchester City ayaa la soo sheegayaa inay u dhaqaaqayso sidii ay u soo xero-gelin lahayd daafaca naadiga Benfica ee Ruben Dias inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo.
Kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa lumisay suuqii xagaaga Vincent Kompany, halka Aymeric Laporte uu haatan dhaawac jilibka ah garoommada kaga maqan yahay, taasoo keentay in tababare Pep Guardiola uu waayo daafac booskaas u buuxiya.
Fernandinho ayaa lagu qabsay inuu ka garab ciyaaro John Stones, waxaana labada xiddig ay ku dhibtoodeen inay xakameeyaan Liverpool intii lagu jiray kulankii Axaddii horyaalka Premier League ee ka dhacay garoonka Anfield, kaasoo ku dhamaaday 3-1 oo ay guusha ku qaadatay Reds.
Kooxda uu hoggaamiyo macallin Jurgen Klopp ayaa sagaal dhibcood oo saafi ah ka sare martay Man City, waxaana Reds ay haatan hoggaanka u haysaa horyaalka Premier League, warbixin dhowaan soo baxday ayaana sheegaysa in Muwaadiniintu ay diyaar u yihiin inay si aad ah ugu qarash-gareeyaan suuqa kala iibsiga ee soo aaddan.
Sida uu warinayso Warsidaha O Jogo Kooxda uu hoggaamiyo macallin Guardiola ayaa bisha Janaayo soo qaadan karta Dias, kaasoo sidoo kale horay loola xiriirinayey naadiga Manchester United.
22-sano jirkaan ayaa labo gool gacan ka geystay 17 kulan oo uu xilli ciyaareedkan u saftay naadiga Benfica, halka uu u saftay 102 kulan kooxda reer Portugal tartammada oo dhan tan iyo markii uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay sanadkii 2017-kii.